izinyoni Sex omdala kulula ukunquma, kodwa ngokuvamile thina uthenge amatshwele umfuyi. Ziyakwazi kulula ukujwayela izandla futhi azivumelanise nezimo ezishintshayo. Kodwa izingane Ukuqagela phansi ezingaphansi kweminyaka engu-izinyanga ezintathu kuyinto ngempela eziyinkinga. Indlela ukuhlukanisa a budgerigar, umfana intombazane? Lokhu kuzoxoxwa ngakho namuhla.
Yiqiniso, okokuqala kubalulekile ukugxila ukubukeka uthande iphuphu. Sicela uqaphele ukuthi waze waba amasonto amathathu, umehluko ubulili namanje akazange abonakale. Kusukela kulonyaka, uchwepheshe uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwabesilisa nabesifazane ku sihlolisisa. Lapho ngineminyaka engu-upholi kusukela emasontweni amathathu ezinyangeni ezintathu ukunquma ocansini singaba phezulu ukufana uqhwaku umbala. Isici esikhethekile khona emibuthanweni ezimhlophe besifazane emhlabeni emakhaleni. Ngo kwabesilisa, abazi khona, ngisho umbala.
Kuphela ngenyanga yesine lokuphila liqala ukubonisa uphawu enokwethenjelwa kakhulu: umbala kwi cere umlomo. It has imibala ehlukene e zabo bobubili ubulili. Esemncane e abesilisa - pink nge Tint okwesibhakabhaka, futhi kakade ifinyelela izinyanga ezine uphendulela blue elikhanyayo. Ngo izinsikazi cere simhlophe, ukhilimu, bomvana, ompunga noma tinge bluish. Njengoba bekhula, yena iba beige noma ensundu. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwahlukanisa a budgerigar, umfana esuka intombazane. abalimi abanolwazi, ukuze ngosizo okuyinto indlela elula iphendukele, ku kwencazelo pay yenkukhu phansi ukunakekela ukuma ikhanda. Kwabesifazane kuba kancane wakhomba, kwabesilisa, ngokuphambene umqhele ububanzi.
Uma ekhaya, ungakwazi ukubuka inyoni yakho uhlamvu nokuziphatha, kungenye indlela kanjani ahlukanisa budgerigar, umfana esuka intombazane. Ungakhohlwa mayelana izici kwesikhathi lithathelwe, lapho upholi kungathatha indawo ekhoneni kude yezinyoni, aqaphelisise ukuthi kwenzekani emhlabeni. Ejwayele ekhaya lakho, le nyoni uqala ukubonisa ezinye izici engavamile kuye.
Ngakho, abesifazane ethulile futhi engongi. Batawuba naye esihlalweni uyakujabulela ukwenza yokuhlanza kuseli, ikakhulukazi esidlekeni aqine. Zonke ukuthi, ngokombono wabo, akudingekile, kuzo bayophonswa ngaphandle cell. Amaduna nobudlelwano ngokwengeziwe futhi likhuthale, zingabantu abalandeli enkulu kakhulu gxuma, zithi ukutshiyoza futhi, ukucula kanye kuhlanganisiwe umculo, elwa Sebawoti lapho bekhuluma, ngokuvamile, ukuze badonsele ukunaka umuntu wakhe. Ziyakwazi ngaphezulu sifutamsindvo, nakuba abesifazane ungafunda amagama ambalwa.
Kwenzeka ukuthi isilwane kumelwe ukubamba lapho eseneminyaka akakuthandi ukuxhumana. Kuleli qophelo bite zesifazane linesisindo ngokwanele, kwenzeka ukuba igazi. Ukuhlasela lowesilisa cishe kuyinto uhlamvu sekukhomba nokubhuqa ngokwabo cishe kobuhlungu. Ngokusho lezi zici uzokwazi ukuqonda ukuthi ubani budgerigar yakho: umfana noma intombazane.
Encane isilwane sakho, kubalula izobanjelwa kanye lithathelwe Trustee kuyoba nobuhlobo bakho. Ngaphezu kwalokho, lo pholi waze elincane phakathi kwabafowabo, aba maningi amathuba okuba ukuthi uzoqala ukulingisa inkulumo yomuntu, ngakho-ke siyakhuluma. Abadayisi musa njalo ukukunika ukwaziswa okunokwethenjelwa mayelana ubudala, cishe zokufuna ukuthengisa, bayocela zonke izinyoni abasha. Phawula iso: upholi abasha ezinombala omnyama, kodwa ngeminyaka ezungeza kukhona isiyingi esimhlophe. Umnyaka ethandwa kakhulu ukudayiswa - izinyanga 2-3, lapho isikhathi mihlobiso iphethini abamnyama ngemuva kucacile kakhulu, izinyoni ovuthiwe ke cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana.
Uma dream of a inyoni ukukhuluma, bese ukhetha umfuyi onesifo ukudayiswa kukhona budgies abasha. Umfana noma intombazane - wonke umuntu unquma ubani ukukhetha, kodwa kungcono ukuthenga iduna, uma esikhathini esizayo unquma ukuba ingazali, amthathe ambalwa.
Uzungu noma cha?
Uma inyoni yakho waphenduka izinyanga 1.5-2, uqale amakilasi elivamile. Ukuze wenze lokhu, nsuku zonke (imizuzu engu-15) ukunyundela imishwana ukuthi kufanele ukhumbule. Kubalulekile ukuthi zingabantu anemibala ngokomzwelo, gqamisa buviyoviyo imishwana, lawa ukukhala upholi ifunda engcono. Kaningi-ke eveza ncamashi sokujabulisa noma ukuthuka, watch out for ngenkulumo yakhe.
Ukukhuluma zopholi (mihlobiso) - akuyona into engavamile, futhi engeyakho okungenzeka kahle izingane ziqala ukusho amagama ambalwa noma imishwana. Kukhona abantu abathile bayakwazi ukufunda lonke inkondlo nobe ingoma, lokhu kwenzeka lapho amathalenta elihlangene upholi kanye zaziziningi nokubekezela. Ngingaba ukuthenga ambalwa isikhulumi ozithandayo? Kulokhu, isidingo ukuxhumana nomuntu uye walahlekelwa, futhi kuyoba inkulumo bayanda inyoni ulimi.
Ukucabanga, ukuthi ukuhlukanisa budgerigar, umfana esuka intombazane? Ungakwazi iphendukele izindlela ezilandelayo:
Cabanga umbala phezu cere uqhwaku: anemibala blue nobuntu kwabesilisa, grey, beige kanye brown - kwabesifazane.
Bagcine ukuziphatha: nabesifazane ngokuvamile ethule kakhulu futhi kwezomnotho.
Ingabe kuzoseshwa inyoni ukukhuluma? Amathuba salokhu okuningi kusuka uyinsizwa ngaphansi kombandela lokuxhumana kwakho njalo futhi ukuqeqeshwa naye.
Amaphilisi okuncipha "Figurin" - impendulo umphumela
Analogs "microlax": Umhlahlandlela, ukubuyekezwa, intengo
Izibuyekezo noma kanjani ukukhetha ihhotela amahle okuhambela nokungcebeleka. izincomo holidaymakers
Paraparesis wemikhawulo aphansi ezinganeni nakubantu abadala: Izimbangela, Ukwelashwa